होमवर्क गर्नु छ - NepalDut NepalDut
हेमराज सानोतिनो ठेक्कापट्टा मात्र होइन आफै मिस्त्री काम र जग्गा दलालीको पछि पनि लाग्ने गर्दथे । उनको छोरी सामुदायिक विद्यालयको पाँच कक्षा र छोरा निजी विद्यालयको सात कक्षामा पढ्दथे । हेमराजले आफ्नो छोरालाई राम्रो शिक्षा दिएर भविष्यमा सकेसम्म छात्रवृत्तिमा नत्र आफ्नो पैसा तिरेर भए पनि डक्टर पढाउने ठूलो धोको साँचेका थिए । छोराले डक्टर पढने बेलासम्म एक करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरेका थिए । उनको खर्च पनि धेरै नै थियो । छोरालाई बाह्रै महिना टिउसन मात्र होइन तीन वर्षसम्म होस्टेल समेत राखेर पढाएका थिए । उनलाई कामको घेरै चाप थियो । उनी साँझमा मात्र घर आउथे । घर आए पछि एकोहोरो छोरालाई भन्ने गर्दथे – होमवर्क गरिस, स्कुलबाट आए पछि पढिस् कि पढिनस् ? कक्षामा फस्ट भइनस् भने– । साथीहरूसंग खेलेको देखे दुई चार थप्पड लगाउथे । दश वर्षानी ताडयत् भन्नेबाट प्रभावित थिए । आफ्नो श्रीमतीसंग पनि छोराको पढाईको विषयलाई लिएर झगडा भै रहन्थ्यो ।
विद्यालयमा हेमराजको छोराको एउटा मिल्ने साथी थिए । ती साथीका बुवाले गाई पालेका थिए । छोराले बिहान बेलुका बावुलाई सगाउँथे । स्कुल जादा दूध लगेर बजार छोड्दथे । पढने, काम गर्ने र मनोरञ्जन गर्ने समयको व्यवस्थापन आफैले मिलाएका थिए । पौडन, एेसलु काफल खान र वनभोज गएको कुरा साथीहरूलाई सुनाउँथे । बुवाले भनेको कथा पनि बाटोमा भन्दै घर आउँथे । उनको पढाइ पनि राम्रो थियो । हेमराजको छोराको जस्तो कति अंक थप्दा विद्यालय छुटाई अर्को विद्यालयमा लैजानन् भनि संचालकहरुले हिसाब गर्नु पर्ने स्थीति थिएन । आफ्ना साथीका कुरा सुन्दा हेमराजको छोरा कलपन्थे ।
एकदिन हेमराजले स्कुल जनिकैको घडेरी एकजना ग्राहकलाई देखाइ ठेक्का लिएको निर्माणाधीन घरतिर फटाफट जाँदै थिए । सत्तल र मन्दिर को छेउमा रहेको पानीको धारामा पानी पिइ मन्दिरको पेटीमा बस्ने बितिक्कै घोप्टो परे । एकजना बटुवाले देखि दौडदै गइ उठाउन खोज्दा उनको सास चल्न बन्द भैसकेको थियो । हारगुहार पछि दाजुभाइ नाता कुटुम्ब स्थानीय सबै भेला भए । डेरा गरेर बसेको घरमा लास नलगि सीधै घाटमा लाने निधो भयो । छोरी पनि रुदै आइ पुगिन् । हेमराजको छोरालाई सम्झाएर फकाएर त्याहाँ ल्याउनका लागि हेमराजका भाइ, वुढा भएका कान्छा बा र उनका सालालाई डेरामा पठाइयो । जब तिनीहरू डेरामा पुगे हेमराजको छोराले दरिमा बसि लेखिरहेका थिए । वुढा कन्छा हजुर बुवाले भन्न थाले – हेर बाबू ! तिम्रा बालाई दैवले चुड्यो । उनलाई आजै घाटमा लैजानु पर्दछ । पीर नगर हामी छौ नि । जाम हिड हामीसंग सत्तलमा । यस्तै हो संसार भनेको ! आदि । हेमराजको छोराले झर्कदै भने- मैले पहिल्यै थाहा पाइसकेको छु । म जान्न जान्न, मैले धेरै होम वर्क गर्नु छ । त्यसपछि लिन गएका व्याक्तिहरु चकित हुँदै एक अर्कोको मुखमा हेराहेर गरे ।